Johane Chitsauko 03. Vanhu vese havana kukwanira kana tasvika pakukunda chivi
» Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Johane Chitsauko 03. Vanhu vese havana kukwanira kana tasvika pakukunda chivi
Johane Chitsauko 03. Vanhu vese havana kukwanira kana tasvika pakukunda chivi
JOHANE 3:1 Kwaivapo mumwe wavaFarise, wainzi Nikodimo, mukuru wavaJudha.
Farise zvinoreva “kuparadzanisa”.
“Nikodimo” zvinoreva “mutapi wevanhu”.
VaFarise vaive vapatsanurwa kuita bato ravo vega rezvechitendero kana sangano.
Vhesi rekutanga iri rinobata dambudziko guru renyika yezvechitendero, vanhu vanotonga kana vatungamiriri vanotapa vanhu kana kuwisira vanhu kumiganhu nemifungo yemutungamiri.
Farise richinyorwa muChirungu kuti Pharisee rinogona kunyorwawo nenzira inotevera”Phae-I-see” kana kuti “Far-I-see” “ndinoona- zviri -kure”.
Vaifunga kuti vaive nemuono wakadzama muMagwaro.
MaJuda paaive muhutapwa kuBabironi vakaparadzaniswa neTembere. Ruzivo rwevanhu mumaJuda rwakakura vakavaka “makereke” avanodaidza kuti masinagoge anotungamirwa nemunhu mumwechete. Iyi yakabva yaita kunge pfungwa yakanaka. Hutungamiri hwemunhu mumwechete hwakabva hwatorwa nechisimba nevanhu vaizvidaidza kuti vaFarise.
Asi kutonga kwevanhu musinagoge kwakaita kuti vatungamiriri kana vatongi vacho vaise mifungo yavo netsika dzavo pavanhu vakaungana. Pasi pekuita kwekuti “ndiri musoro kana kuti mutungamiri wekereke” nezivo, vatongi vevaFarise vakaparadzanisa ungano dzavo neShoko raMwari rakanyorwa vakabudirira pakuita kuti vanhu vavo vapesane nechinhu chikuru chekuti Jesu aivepo kuzadzisa Shoko raMwari rakanyorwa paKuuya kwake kweKutanga. MaJuda akanamirira kuvatungamiri vavo, vaFarise, pachinzvimbo chekutevera Jesu.
VaFarise vaive vabudirira kutapa maJuda mazhinji nemasinagoge avo pavakadzoka kubva muhutapwa kuBabironi. MuFarise aive achitonga sinagoge nenzira imwechete inoshandiswa nemufundisi kutonga kereke. Vatungamiriri vevanhu ava vakatora hutongi pamusoro pevanhu vakavadzidzisa kuramba Kristu.
Ungano yakava pasi pemunhu aiitungamirira nekukasika. Vakabva vatapwa.
Ndiro rakava tsime retsika dzavaNikoraiti dzinova kutapa vanhu kana ungano. Kusimudzirwa kwemunhu mutsvene kuti atonge kereke.
Mwari akavenga izvi.
Kuita kunorwadza uye kutyisa kunobva kwabuda pachena. Kereke inofanira kutungamira vanhu kuti vagadzirire Kuuya kwaJesu kwechipiri, anoita kuti vanhu vaponeswe zvakanaka asi ovatungamirira kubva pakutenda zvakanyorwa muBhaibheri.
Nikodimo akauya kuzotaura naJesu akaziva kuti aive asingazivi zvinhu zvakakosha. Akaonawo kuti vanhu vaive mumasinagoge vaive vakasungirirwa pakusaziva uye kutadza kwevatungamiriri vavo. Makereke ane dambudziko rimwechete iri nhasi. Kune masangano 45 000 akasiyana emakereke pasi pano, vese vanoti vane chokwadi. Pane chinhu chisina kuita zvakanaka zvachose. Uku kurasika pamweya kwechokwadi.
Mutongi uyu, anenge atapa vanhu pakuedza kwake kubatira Mwari, akauya kuna Jesu (Shoko raMwari) akaona kuti aive asingazivi kuti aitaura pamusoro pei. Aive asingazivi hurongwa hwaMwari kunguva yake. Vatungamiriri vemakereke vasina chavanoziva vakangofanana nevadzvanyiriri venyika dzemuAfrica. Vanoramba kubva pazvigaro zvehushe.
JOHANE 3:2 Iye akavuya kwaari vusiku, akati kwaari: Rabhi, tinoziva kuti muri Mudzidzisi wakabva kunaMwari; nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita, kana Mwari asinaye.
Akanyangira nguva dzeusiku. Hakuna munhu anofanira kundiona. Kuratidzwa kwekutya kukuru kunosuwisa kuri muzvitendero zvedu. Munhu anoona kuti pane chinhu chisina kumira zvakanaka asi otya kuchitaura pachena. Anotyawo kubvuma kuti iye anoda kugadziriswa naJesu, Shoko raMwari. Ndiko kuita kuriko mazuvano kunoita kuti vanhu vakoshese kuparidza kubva pamazwi akataurwa nevanhu.
“Zvakanyorwa zvichinzi...” hakusisiri kugadziriswa kunodiwa nemakereke nhasi uno. Kutevera Magwaro kunotoonekwa sekudzungaira.
Dai makereke vaive vachiri kutevera Magwaro vangadai vasina mufundisi semutungamiri wavo kana semutongi wekereke. Hakuna kereke yakaita izvozvo muTestamente Itsva. Vaive mapoka maduku aisangana mudzimba.
VAROMA 16:5 Ndikwazisirei vo kereke iri paimba yavo. Ndikwazisirei Epeneto, mudikanwa wangu, ndiye chibereko chokutanga munaKristu paAsia.
Kereke inosanganirana mumba. Zano rakanaka kunguva yekereke yeRaodikia.
Nicodemus accepted that Jesus was special. God was with Him. Nikodimo akatambira kuti Jesu aive munhu akasarudzika. Mwari aive naye.
“Tinoziva...” zvinoratidza kuti vaFarise vose vaiziva kuti Jesu aive nechokwadi. Asiwo vaive vakasungirirwa kumasinagoge avo nekuti ndiko kwaibva mari dzemihoro yavo.
Saka makereke anobvuma kuti Bhaibheri ndiro Chokwadi asi panguva imwechete vanobatirira patsika dzavo dzisina kubva muBhaibheri. Kisimusi, muti weKisimusi, 25 Zvita, achibhishopu, kadhinari, pope, Mwari-mumwechete-muVanhu -vatatu, vekukosha kumwechete, munhu wechipiri muhuMwari, Tiriniti, isita egi nemabhani, shanduko yevanhu kubva kumhuka, Big Bang.
Saka tiri kurarama munguva yakaoma yekutenda mune zvimwe zvidimbu zveBhaibheri, tofuratira zvimwe tichiti hazvina kukosha, tichiwedzera zvimwe kubva kutsika dzechipegani nezivo dzesainzi (dzingori fungidziro).
Hatitsananguriwo Magwaro zvichibva pane mamwe Magwaro.
Tinobapatidza muZita raBaba, Mwanakomana, naMweya Mutsvene nekuti Jesu akati tidaro.
Asi apa hapana Zita. Asi zvinzvimbo zvitatu.
Asi tinorega rubapatidzo muZita raJesu nekuti Petro akataura kudaro, saka haana kukosha sezvakaita Jesu.
Apa Zita rakataurwa. Zita raJesu.
Pauro akabapatidzawo neZita raShe Jesu.
MABASA 8:16 .... vakanga vangobhabhatidzwa muzita raShe Jesu bedzi.
Zvakare Zita rataurwa, Zita raJesu.
Saka Jesu ndiro Zita raishandiswa nevapostora kubapatidza. Isu tinongoti vaive vachitadza.
Asi Pauro akati kana tikaparidza rimwe Evangeri, takatukwa. Saka hatingati aive achitadza.
VAGARATIA 1:9 Sezvatakamboreva, zvino ndinoreva zve saizvozvo: Kana kunomunhu unokuparidzirai imwe Evhangeri, inopesana naiyo yamakagamuchira, ngaave wakatukwa.
Kana muchipokana naPauro, muri mudambudziko rakaoma.
Pauro akatiwo zvese zvatinoita tinofanira kuzviita muZita raJesu.
Zita rimwechete ndiro rakataurwa pano, Zita raJesu.
“Zvese zvatinoita zveshoko kana zvebasa”. Rubapatidzo ibasa, kana kuti chinhu chinoitwa chichionekwa chinofamba nekutaurwa kwemashoko.
Saka rubapatidzo kuita kunosanganisa zvese shoko nebasa.
Saka zvinoita kuti rubapatidzo rwaPauro runge ruri rwakanaka uye rubapatidzo muzita raBaba, Mwanakomana, neMweya Mutsvene rwakaipa (nekuti hapana zita raJesu rataurwa).
Rubapatidzo mucherechedzo wekufa, kuvigwa nekumuka.
Jesu oga ndiye akaita izvi.
Baba naMweya Mutsvene havana kubvira vafa, kana kuvigwa, kana kumuka kubva kuvakafa. Saka vanosanganiswa sei parubapatidzo?
Mubvunzo mukuru wekubvunza ndewekuti, “Zita raBaba, Mwanakomana nereMweya Mutsvene nderekuti kudii”?
Makereke haagoni kudaira mubvunzo uyu. Havagoni kutipa zita rimwechete reVanhu vatatu vari muhuMwari.
Mapostora anoti Zita racho ndiJesu.
Vanoona sei huMwari?
SaBaba, Mwari aive pamusoro pemaJuda. Vaimudaidza kuti Jehova. Izvi zvinoreva kuti Ishe.
SeMwanakomana, Mwari aive nemaJuda. Emanuere. Vakamudaidza kuti Jesu.
SeMweya Mutsvene, Mwari ari matiri achitiita “vakazodzwa”, zvinodaidzwa zvichinzi Christos muchiGiriki. Kristu. Zita raMwari remunhu ndi Jesu. Asi tinoda zita rechinzvimbo rimwechete kuti tizive kuti tiri kutaura Jesu upi, nekuti dzimwe nyika dzinoshandisa zita rekuti Jesu kuvanhu.
Saka Ishe Jesu. Kana kuti Jesu Kristu. Kana kuti Ishe Jesu Kristu ndiro Zita raBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene.
Nenzira iyi tinowana Magwaro akasiyana ekubatanidza pamwechete, pachinzvimbo chekufuratira Magwaro kana kutaura kuti mapostora akatadza. Zvakashata. Jesu akavadzidzisa uye vaiziva kuti aitaura nezvei.
JOHANE 3:3 Jesu akapindura, akati kwaari: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Kana munhu asingaberekwi kutsva haangavoni vushe bwaMwari.
“Kuvona” vushe hwaMwari kunzwisisa Bhaibheri nekugona kubatanidza Magwaro pamwechete kuti abvumirane ataure chinhu chimwechete.
Mweya Mutsvene uchatitungamirira muzvokwadi yose.
Shoko raMwari chete ndiro rechokwadi.
Hatisi pano kugadzirisa kana kunatsa kana kushandura Magwaro. Tiripo kumabatanidza izvi zvinoitika chete kana tazvarwa patsva. Izvi zvinogoneka chete kana tazvarwa patsva, zvinoreva kuti tinofanira kutendeuka kuti Mwari aise chidimbu cheMweya wake mumoyo yedu. Zvino Mweya iwoyo unokura matiri uchisuka moyo yedu. Zvino Mweya unoramba uchikura kusvikira watora hupenyu hwedu serubapatidzo rweMweya Mutsvene. Mweya unobva wakura matiri zvakawedzerwa zvekuti unotiisa panzvimbo mumuviri weMweya waKristu kuti tinzwisise kana kuona Shoko rakaziviswa kunguva yedu. Ipapo ndipo patinonyatsoona kubva kushoko raMwari rakaziviswa kuti ari kuitei kwatiri.
Kusvika apa Mwari anofanira kutitora zvakazara. Hatingawani kuda kwake kana nzira yake neruzivo rwedu isu vanhu.
Saka danho rakakosha kuramba kuda kwedu sechipo chatinozvipira kuna Jesu. Zvino kuda kwaMwari kunotsiva kuda kwedu kune miganhu Mwari anenge akugona kutishandisa muMuono wake Mukuru wakasiyana kwazvo nezvedu zvatinokwanisa kufunga kuita. Mwari anoda kuva pamusoro pekutonga hupenyu hwedu.
ISAYA 55:9 Nokuti denga sezvarakakwirira kupfuura nyika, saizvozvo nzira dzangu dzakakwirira kupfuura nzira dzenyu, nendangariro dzangu kupfuura ndangariro dzenyu.
Anoda kuti tidzidze kufunga nenzira dzaanoda iye. Anoda kuti titende kune zvakanyorwa muBhaibheri chete. Haadi munhu anomira pakati pedu naJesu.
JOHANE 3:4 Nikodimo akati kwaari: Munhu ungagoberekwa seiko ava mukuru? Ungapinda zve mudumbu ramai vake rwechipiri, akaberekwa here?
Nikodimo aive asina ruzivo rwekuberekwa patsva mumweya. Aingofunga kuberekwa kunoitwa nanamai vedu.
Asi kuberekwa kwatinoitwa nanamai vedu kwakaipa nekuti tinoberekerwa kufa.
Eva ndiye aifanira kuva mhandara Maria. Aizozadzwa neMweya Mutsvene obereka Jesu. Angadai akakura kungadai kusina zvivi zvekufira. Ipapo ngadai akadaidza nekusika vatsvene vake vese kubva kuguruva renyika. Angadai akasika vanhu vakakwanirana kuzadza nyika. Kungadai kusina dambudziko rekuwandisa kwevanhu. Kusinawo vamwe vanozotsva kugehena.
Asi Eva akasarudza kuunza hupenyu nebonde, rinodaidzwa kuti kuzivana kwemurume nemukadzi. Chinhu chimwechete chinoitwa nevanhu chakanaka uye chakaipa. Chakanaka muwanano chakaipa kunze kwewanano.
Musi waunoudya, musi uyo uchafa.
GENESISI 2:17 Asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya; nokuti nomusi waunoudya, uchafa zvirokwa­zvo
Kusangana pabonde kunoonekwa sekudya.
Zuva kunaMwari rakaita semakore 1000.
Hakuna munhu akabvira ararama makore 1 000. Munhu akanga ararama kukunda vamwe vese ndiMetusera akaita makore 969.
Asi Jesu ari kutaura pamusoro pekuzvarwa kwakasiyana neuku zvachose kunounza hupenyu husingagumi, sezvo chero mwana anoberekwa kubva pakusangana pabonde akaberekerwa kuzofa nekuchembera.
JOHANE 3:5 Jesu akapindura, akati: Zvirokwazvo zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Kana munhu asingaberekwi nemvura noMweya, haangagoni kupinda muvushe bwaMwari.
Mvura iShoko raMwari. Tinofanira kutenda nekuteerera zvese zvinoziviswa muMagwaro panguva yedu.
Tinofanirawo kutendeuka nekukumbira Mweya waMwari kupinda mumoyo yedu. Tinofanira kubva taramba kuda kwedu kuti Mweya waMwari ukure mukati medu kusvikira watanga kutonga zvese zvehupenyu hwedu. Mweya Mutsvene wega ndiwo unokwanisa kuzotitungamirira muChokwadi chese kuti tinzwisise zvakazara Shoko raMwari rakaziviswa kuzuva redu.
Zvino hatizotauri kuti kune Magwaro asina kukosha kana asina basa kana asina kukwanira. Hatizotauri kuti Gwaro rakatadzikwa. Hatizoedze kushandura kana kugadzirisa Magwaro kuti areve zvimwe zvakasiyana nezvaanoreva.
Takatarisa kereke yenguva yekupedzisira yanhasi. Bhaibheri reKing James Vhezheni rakatangwa munguva yechisikwa-Munhu chakamira chakapoteredza chigaro chaMwari chevushe, ndiro mukuru wedu. Munguva iyoyo yemutsiridzo, Mwari akakomborera vanhu muzvipo zvemitauro kuti vagone kuturikira mitauro yakashandiswa kunyora Bhaibheri. Havana kuedza kunzwisisa zvese, asi vakaisa kukosha pakuturikira shoko rimwe nerimwe nenzira yakanaka. Hatifaniri kupedza nguva yedu kugadzirisa kana kushandura Bhaibheri. Tinofanira kuteerera chisikwa-Gondo chine maonero anopinza ekuti micherechedzo uye zviitiko zveBhaibheri zvinorevei.
Zvino, tichakwanisa kubatanidza Magwaro pamwechete, hatizomaiti kuti arwisane zvinozotimanikidza kuzongosiya mamwe Magwaro akadaro.
Tinofanira kuturikira Magwaro muzvirevo zvemamwe Magwaro nguva dzose. Kwete muzvirevo zvemifungo yevanhu vakachenjera.
Vakawanda mukereke vanoti “iye” ndiantikristu achiita sungano nemaJuda yekuita makore manomwe munguva yeKutambudzika kukuru.
Asi hakuna mamwe Magwaro anotaura zvimwechete izvi.
Chinhu chekungwarira. Sungano yakasimbiswa kwete kungoitwa chete. Saka sungano yaive yaitwa rini? Hapana mhinduro inobatika, nekuti hapana Gwaro rinotsigira muono uyu.
Tarisai zvinoitika kana tikatsanangura ruGwaro urwu muzvirevo zvemamwe Magwaro. Tinowana mhinduro yakasiyana zvachose.
Saka Mwari akaita sungano naAbrahama nevana vake, maJuda, kuti avape Nyika yeChipikirwa Israeri.
Asi sungano iyi yaive nechimwe chirevo chakadzama pamweya.
Kristu ndiye aive mwana waAbrahama wekutenda.
Isaka semwana waAbrahama wekubereka panyama aikwanisa kutora nyika yeIsraeri kuitira maJuda senyika yechipikirwa.
Jesu semwana wemweya waAbrahama, aikwanisa kutora zvakawanda.
Sungano iyi, payakasimbiswa naMwari muchibairo chaKristu pamuchinjikwa munyika yechipikirwa, yakapa hupenyu husingaperi “kuvazhinji” (isina kusimbiswa kumaJuda) muDenga idzva neNyika itsva (nyika yechipikirwa yakakura kwazvo isingagumi isina vavengi vanorwisa).
Jesu aifanira kuita hushumiri hwemakore manomwe. Asi mumashure memakore matatu nehafu akabva aurayiwa. Apa paive pakati pevhiki kana kuti makore manomwe aive akavimbiswa maJuda.
Pakafa Jesu, Mwari akabvarura chidzitiro cheTembere. Izvi ndizvo zvakapedza zvipo zvezvibairo zvemhuka zvaiitwa nemaJuda. Hapana chibairo chingafananidzwa nechipo chaakatipa ichi.
51 Ipapo tarira chidzitiro chetembere chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvikira pasi;
Tembere yakaparadzwa mugore 70AD parizvino mosiki yaOmar wemaMosiremu neDome remaMosiremu rinodaidzwa kuti Dome of the Rock zvakavakwa pagomo reTembere panzvimbo yaimbova nzvimbo tsvene yeTembere yemaJuda.
Izvi zvinotaura pamusoro pezviitiko zvakati kuti, tichitarisa zvichibva pamashoko akakomberedzwa.
Asi pamaratidzikiro ezvinhu nhasi zvivakwa zvemaMosiremu chete ndizvo zviri panzvimbo yaimbova yakavakwa Tembere. Saka chiIsramu chikamu cheyangadzi dzinoparadza.
ChiIsramu chinoramba Jesu saMwari. ChiIsramu chinorambawo kuti Jesu akatifira pamuchinjikwa kuripira zvivi zvedu.
Saka chiIsramu hachina Muponesi anoponesa maMosiremu. Vanofanira kuzviponesa. Saka chiIsramu chinongopa mukana wekuita mabasa akanaka anounza zviberoko zvakanaka senzira yekuenda kudenga. Hakuna munhu anokwanisa kutaura kuti akaita mabasa akanaka akakwana kuti agone kuenda Kudenga. Chinhu chinotyisa ndechekuti maIsramu echiuto anosarudza kuzviuraya sandiyo yega nzira yekuenda Kudenga. Izvi zvinoderedza chiIsramu chechiuto kuchiisa pakunzi chitendero cherufu.
ISIS ndiro rimwe bato rechiIsramu chechiuto. Vanoraramira kurwadzisa, kuparadza nekunyangadza.
JOHANE 3:6 Chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa noMweya, mweya.
Nyama ichafa. Nyama iri muhusungwa kuzvivi. Saka vanhu vane hunhu hwekutadza husingazonzwisisi chokwadi.
I VAKORINTE 15:31 ... ndinofa zuva rimwe nerimwe.
Tinofanira kufa kuzvivi zvedu zuva nezuva. Hatikwanisi kuvimba muhutungamiri hwevanhu kuti hutitungamirire nekuti, sesu, vanowiswa nekusaziva kwavo nekutadza. Tsika dzevanhu hadzitiendese kuna Mwari.
Mafungiro endangariro dzevanhu dzakazara zvivi anotongwa naSatani haangavimbwi maari.
Hakuna munhu, asiri Jesu angavimbika.
Vanhu vese vakaberekerwa rufu negehena sezvo kusina munhu anokwanisa kuzviponesa kubva kurufu, saka hakuna munhu anokwanisa kuwana ruponeso kubva kugehena nekuda kwemabasa akanaka aakaita.
Nyama yese yakasikirwa kufa kubva pazuva rekuzvarwa.
Zvakadaro, kurarama chinhu chisina maturo muzvirevo zveruzivo rwevanhu uye kushingaira kwavo.
MUPARIDZI 1:2 Zvanzi noMuparidzi, hazvina ma­turo chose, hazvina maturo chose, zvose hazvina maturo chose!
Munhu akapfumisa uye akachenjeresa anozongofa nekuenda kugehena. Mifungo yevanhu haikwanisi kupinda muchidzitiro cherufu nekuzotiudza nezvehupenyu hunotevera. Kufunga kwevanhu uye kuita kwavo hakugoni kubvisa chero chivi chimwechete, kana zvinokonzereswa nechivi, kana mugove wechivi muhupenyu hunotevera.
Mweya waMwari hauvimbi nyama yevanhu neshuviro dzevanhu zvachose.
Mweya unoda kuuya mumoyo yedu kuti uuraye kuda kwedu. Mweya waMwari unoda kuti titevere hurongwa hwake hweruponeso husina chekuita nekufunga kwevanhu kana kushingaira kwavo.
Nzira yekuenda Kudenga iri mumaoko maMwari. Haangatsananguri zviitiko zvese zvekutambudzika kana asingaone zvakakodzera. Izvi zvinoitika nekuti njere dzedu vanhu dzakaisirwa miganhu hadzinzwisisi kudzama kwendangariro dzaMwari kana kubatanidza kuparara kwerudzi rwevanhu nezvisikwa zvakatukwa nekuda kwechivi.
Anoraira kuteerera. Mweya unoda chinhu chimwechete kubva kuvanhu venyama. Tinofanira kuva nekutenda kuzere muShoko raMwari rakaziviswa muzuva redu. Tinofanira kusiya zvese kwaari.
JOHANE 3:7 Usashamiswa, nokuti ndakati kwauri: Munofanira kuberekwa kutsva?
Panozvarwa mwana anenge asina chaanoziva uye asingagoni kana kuzviitira chinhu. Anenge achifanira kutarisirwa nekuitirwa zvese nevabereki vake uye anofanira kuteerera vabereki vake. Vanoda mwana iyeye uye vanoita zvese zvavanogona kumubatsira. Apo mwana anenge ari muduku asina zvaanogona kuzviitira, mwana iyeye anenge akachengetedzeka nekuti haagoni kuzvikuvadza. Kutanga kwaanoita kugona kuita zvinhu, ndiko kukurawo kwemikana yekuti mwana iyeye azvikuvadze. Mwana anenge asina ruzivo rwezvakamupoteredza kuti azive zvakanaka nezvakaipa kutambisa. Mwana anoteerera nekunzwisisa zvaanoitirwa nezvaanoudzwa nevabereki vake, ndiye mwana akachengetedzeka.
Saka tinoda kuzvarwa patsva. Mweya Mutsvene mutsva unofanira kukura matiri. Mweya wedu wevanhu unofanira kufa kuva mweya pasina. Kukura kwekushaiwa basa kwehunhu hwedu hwekare, ndiko kukurawo kwekuteerera kwedu uye kuvimba neMweya waMwari unotiratidza nzira yakanaka kuMagwaro.
Hatina simba zvachose,mukuedza kwedu, kukunda Satani nekuenda Kudenga.
Satani muvengi ane simba kwazvo. Jesu ega ndiye anokwanisa kumukunda. Hakuna munhu angaedze.
JOHANE 3:8 Mhepo inovhuvhuta painoda napo, unonzwa inzwi rayo, asi hauzivi painobva napainoenda; mumwe nomumwe wakaberekwa noMweya wakadaro.
Hondo chaiyo iri munzvimbo dzepamusoro-soro nzvimbo dzemweya. Kurwa kuri pakati paMwari naSatani. Hatina ruzivo rwekuti Mwari ari kurwisa Satani sei munzvimbo dzepamusoro dzemweya. Hatinzwisisi kuita kwemweya. Hatitozivi kuti mhepo inotangira kupi uye inomirirepi. Tinongoziva zvainokonzeresa painovhuvhuta ichipfuura nepatiri.
Ndangariro dzaMwari nemazano ake akakura kukunda edu. Haazivisi hurongwa hwake kumuvengi.
Saka muhondo dzemweya dzisingaonekwe, tinongoona kumwe kufamba kwaMwari paanopindira nedzimwe nzira dzatinoona pachena. Imwe nguva yese hatizivi kuti chii chinenge chichiitika. Mwari anotevera kuda kwake. Mwari, achiita kuti zano rake rekurwisa rive chakavanzika kuna Satani, anoda kutsvaira hupenyu hwedu kupinda muhutorwa makaoma matingaedza kusapinda kana kufunga nezvamo, kuti aite kuda kwake muhupenyu hwedu.
Simoni wekuSairini akamanikidzwa kutakura muchinjikwa waJesu. Angadai asina kubvira aita izvi zvichibva mukuda kwake. Asi chaive chinhu chakanaka kwazvo chaakabvira aitawo nehupenyu hwake.
Saka tinofanira kuziva Bhaibheri tokura pamafungiro anoda kuteerera Mwari chete, kwete mumwe munhu anotungamirira. Zvino Mwari anobva atanga kutishandisa nenzira inodiwa neMagwaro yakasiyana kwazvo nemafungiro neshuviro dzevanhu. Tinofanira kubvunza Magwaro kune zvatinofanira kutenda mazviri.
Tinofanira kukwanisa kupokana nechero munhu anotungamira, zvisinei nembiri kana simba raanaro, kana zvaanotaura zvisingawanikwe muBhaibheri Shoko raMwari. Tinofanira kutungamidza Mwari. Tichienzanisa naJesu, vamwe vanhu vese vanotungamirira vanonyangarika panzvimbo.
Kana tazvarwa paMweya tinenge takutenda kuShoko rakanyorwa chete. Kwete vamwe vanhu vese. Munhu wese inyama saka anotadza. Hakuna munhu anoziva zvese. Hakuna munhu anoziva zvakakwana. Munhu wese anoda kudzidza, kurasa zvimwe zvaakadzidza nekudzidza zvitsva.
Kune munhu mumwechete chete akarurama, Jesu Kristu. Ndiye Shoko raMwari rakanyorwa rakaziviswa kwatiri. Tinoteerera iye chete kupfurikidza kutenda kuShoko rake rakanyorwa.
Nenzira iyoyo tinova vakakosha muhondo yake yakaipa kwazvo nemweya waSatani nemadhimoni ake. Kana mukatevera Magwaro zvakazara munova chikamu chenzira yaMwari yekukunda Satani pachinzvimbo chekuva chikamu chedambudziko rinoda kurwiswa.
JOHANE 3:9 Nikodimo akapindura, akati kwaari; Zvinhu izvi zvingagoitwa seiko?
Nikodimo akarasika zvakazara. Mazano ari kupihwa vanhu nemutongi wemaJuda kutambisa nguva chete. MaJuda aive asingashanduki kuva vanhu vari nani. Havasi kurasa rudo rwavo rwekutadza. Vatungamiri vezvitendero zvavo vari kutopikisa Jesu. Asi Jesu aive ari iye ega munhu aiziva zvaaitaura nezvazvo.
MaJuda aive achitevera Testamente yekare asi pasi pehutungamiriri hwevakuru vezvitendero zvavo nekuita izvi vaive vasina kwavaienda. Vanhu vaitungamirira vaive vaita Israeri marombe pamweya. MaJuda aive asisaziva zvekuita zvino apo Messiasi aive auya. Vatungamiri vavo vaive vasingazovatenderi kutevera Jesu. Vatungamiri vavo vaive vasina chavaiziva muchinhu chinonzi kutenda. Zvino Magwaro pamusoro paMessiasi zvaaive ozadziswa, zvisinei nekunge aive akurirwa nzira naJohane Mubapatidzi, maJuda aizomuramba pachinzvimbo chekumugamuchira.
Jesu haashanduki zvachose.
Pakuuya kwake kwechipiri, kunokurirwa nzira nekuziviswa kwezvakavanzika zveShoko rakanyorwa, vatungamiri vemasangano eMharidzo vacharambawo Shoko rakanyorwa sezvo vachishingirira kuturikira Shoko risina kunyorwa riri pamusoro peKutinhira kunomwe, Chisimbiso chechinomwe, uye Zita idzva raJesu zvichibva pazvirevo zvemazwi akabatwa paitaura vanhu. Pane maonero akasiyana siyana pamusoro penyaya idzi. Saka sarudzai zvamunoda kana musingagoni kuzvidzora pachenyu kuti mugare nezvakanyorwa muMagwaro.
Kana muchitenda kudzidziso idzi, munenge muchitenda mune zvisiri muBhaibheri.
Pope anotendawo mudzidziso dzisina kunyorwa muBhaibheri.
Pakutanga, izwi rekuti “Pope” harina kunyorwa muBhaibheri. Kana izwi rekuti “Kadhinari”, kana rekuti “achibhishopu”, kana kuti, “mufundisi ndiye musoro wekereke”.
Kunatsurudza uye kuturikira mazwi akataurwa kunoita kuti vafundisi vemasangano eMharidzo vataure kuti Mutumwa mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10 akauya panyika makore akatenderedza 1963 na 1965. Vakawanda vanoti Ishe vakauya kare, kare kare muna 1963. Saka kana zvakadaro nyasha dzinenge dzakaguma panguva iyoyo. Kunze kwekuMwenga waKristu. (Edzai kutsigira izvi zvichibva muBhaibheri).
Hapana pakati pedzidziso idzi inokwanisa kutsanangurwa kutangira kuna Genesisi kupfuura nemaBhuku ese eBhaibheri kusvika kuna Zvakazarurwa. Misi iri pamusoro peGore rakaonekwa zuva richangodoka musi wa28 Kukadzi 1963 paFlagstaff uye kushanya kwevatumwa vanomwe pedyo neTucson mangwanani emusi wa 8 Kurume 1963 kunoita kuti zvive pachena kuti vatumwa havana kuita Gore pavakabva kwaive nehama Branham. Ongororesai mazwi ese akataurwa musati matenda mune zvaanoreva. Kukundikana kwefungidziro dzekuparadzwa kweAmerica dzemuna 1977 kunofanira kumira seyambiro pamusoro pevatungamiriri vemasangano eMharidzo vanotaura kuti mazwi ese akataruwa ndeechokwadi. 1977 asati asvika takaudzwa kuti tisiye mabasa edu sehumbowo hwekuti tinotenderana nefungidziro idzi.
Vaparidzi vamwechete vakambosimbirira pamusoro pegore iri vave kuzviramba. Hutungamiri hwevanhu?
JOHANE 3:10 Jesu akapindura, akati kwaari: Iwe uri mudzidzisi wavaIsraeri haunzwisisi zvinhu izvozvi here?
Jesu akanongedzera kusavimbika kunokwanisa kuita vatungamiri vezvitendero. Vanoramba Magwaro avasinganzwisisi uye vanotenda kuti vane chokwadi chakazara. Uku kurwisa Magwaro. Kana kuine Magwaro amusingakwanisi kutsanangura munenge musina chokwadzi chakazara.
JOHANE 3:11 Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Tinotaura zvatinoziva tinopupura zvatakavona; asi imi hamugamuchiri kupupura kwedu.
Jesu mubatanidzwa waMwari neMunhu. SeMunhu wenyama anozviwisira zvakazara kusimba reMweya unoshamisa unogara maari.
VAKOROSE 2:9 Nokuti kuzara kwovuMwari kunogara maari pamuviri
Jesu ega ndiye anoziva chokwadi chakazara. Chokwadi ichocho chakanyorwa muBhaibheri. Asi vatungamiri vezvitendero vezuva rake havana kugamuchira zvakanyorwa muMagwaro pamusoro pake.
Nhasi, vatungamiri vemakereke havagari vari mumiganhu yavakaisirwa neShoko rakanyorwa. Vanoda kwazvo kushandisa pfungwa dzavo sezvo zvichivaita vakachenjera. Kushaiwa hanya neBhaibheri rakanyorwa uku kune mubairo unosuwisa kwazvo unoona vaKristu vanhasi vachigara vasingazivi zvizhinji muBhaibheri. Bvunza muKristu muti atsigire chimwe chinhu neBhaibheri nekutevera chinhu ichocho mumavhesi akati kuti muMagwaro. Vanobva vasimudza maoko mudenga.
Vaudze kuti vatangire pfungwa yavo kuna Genesisi. Vanogumirwa.
JOHANE 3:12 Kana ndakakuvudzai zvinhu zvenyika, mukasatenda, mungagotenda seiko, kana ndichikuvudzai zvinhu zvokudenga?
Zvinhu zvemweya inzira dzakadzama dzakavanzwa pasi pemicherechedzo nezviitiko zvemuBhaibheri. Tinoda mumwe munhu kuti atizivise zvakavanzika zvakanyorwa izvi kupfurikidza kubatanidza pamwechete Magwaro akakodzera kubva kuna Genesisis kusvika kuna Zvakazarurwa.
Hatitonzwisisi zvinhu zvenyika ino kana zvinhu zvatinoona.
Hakuna anoita nezvesainzi anokwanisa kutsanangura kuita kwesimba rekudonha kwechinhu kubva kudenga kuti kunodhonzera sei chinhu pasi.
Hatizivi kuti chinonzi erekitiriki chaji chii.
Hatizivi kuti mirairo yemamiriro ezvinhu panyika yakabva kupi kana kuti nei simba remagetsi rakakura zvakapetwa mamiriyoni kukunda simba rekudonha kwechinhu kubva mudenga.
Fungidziro dzedu pamusoro pemamiriro ekunze kazhinji kacho dzinenge dzakarasika. Misika yezvemari inoita zvainoda nemari dzevanhu.
Dhokotera Robert Oppenheimer vakatungamirira chikwata chakagadzira bhomba reatomi rekutanga muna 1945. Aive shasha munezvesainzi. Paakabvunzwa nevenhau kuti atomi chimbori chii, akadaira kuti, “Chinhu chisingazivikanwe chinoita zvatisingazivi”.
Saka Jesu anotiyambira kuti kana paine zvinhu zvakawandisa zvenyika ino zvatisinganzwisisi, hakuna imwe nzira ingagone ruzivo nehungwaru hwedu vanhu kunzwisisa zvinhu zvemweya.
Saka tinofanira kufa pakuita kuda kwedu nemifungo yedu totenda kune zvinotaurwa neBhaibheri chete. Bhaibheri ndiro rega mutungamiri wekuti tikatevera tinenge takachengetedzeka.
Kana muchida kuona zvinhu zvemweya, munofanira kufa kuti mupinde imomo. Ngwarirai, munokwanisa kunosvika kunzvimbo yakanaka kana yakaipa. Kuzopedzisira masvika munzvimbo dzevakarasika hazvifadzi.
Saka tichiri panyika, tinofanira “kufa pakuda kwedu” kana tichida kuti Mweya Mutsvene utidzidzise kubva muBhaibheri pamusoro pezviri kuitika muhondo dzemweya dzatisingagoni kuona nemeso edu enyama.
VAEFESO 6:12 Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati, navanesimba, namadzishe enyika erima rino, nemweya yakaipa yedenga.
Kuti tiwane ruzivo rwedenga kubva munzvimbo dzepamusoro dzemweya, kuri kurwiwa hondo chaiyo pakati paMwari naSatani, tinoda kudzidziswa neumwe munhu aimbova kudenga akaona kuti chii chaiitika. Kune munhu mumwechete chete. Jesu pachake.
Chinhu chekuti akaburuka panyika kubva Kudenga, zvinoratidza kuti aive Kudenga.
Nekuti ndiye zvese Mwari neMunhu, akaita zvisingagoneki nechero munhu. Anogara Kudenga nepanyika nguva imwechete.
Ruzivo rwevanhu harugoni kugadzirisa dambudziko rekutsanangura kuti takabva kupi, nei tiri pano, uye kuti tiri kuenda kupi.
Vesainzi havagoni kugadzirisa dambudziko rekuti sei pakutanga kwaive kusina chinhu kukazova nechinhu. Kana kuti tingaziva sei kuti zvinhu zvakafa zvingararama zve sei.
Tinoda ruzivo runobva kumusoro kana tichida gwara pamusoro penyaya dzakarema kudai.
Muono wakadzama. Jesu angava sei Kudenga kana ari panyika? Denga inzvimbo yepamusoro-soro, inzvimbo yemweya. Mweya wehupenyu uri matiri ndiwo wega nzira yatinogona kutaura nayo neDenga. Ndicho chikonzero nei tichinamata.
Kuzara kwehuMwari kunogara pamuviri muna Jesu. Saka Mweya waMwari waive maari waive Kudenga, apo muviri wake wenyama waive panyika.
Onai mufananidzo wenyika senzvimbo yekutanga, mutsetse murefu wakatwasuka.
Denga ndiyo nzvimbo yepamusoro ndiyo peji rese.
Tarisai kuti nzvimbo yepamusoro yeDenga inobata sei mutsetse. Asi nekuti mitsetse yeruvara rweshizha haigoni kufamba ichikwira kudenga kana kudzika, inogona chete kufamba ichienda kumativi, saka mitsetse mipfupi yeruvara rweshizha haina ruzivo rwekuti kune Denga.
Ngatitii munhu ndiye mutsetse mupfupi weruvara rweshizha.
Jesu semunhu mutsetse weruvara rweshizha zvakare. Mwanakomana waMwari. Saka kuzara kwevuMwari kunogara maari kuri kupi?
Inenge yava mitsetse mizhinji yakanyorwa pamusoro pake. Hakuna muganhu kuchiverengo chemitsetse iyi.
Saka Jesu ndiye “mutsetse wemitsetse”. Bhaibheri rinotaura pamusoro peMweya usina muganhu uri maari nekumudaidza kuti “Mambo wemadzimambo”.
I TIMOTIO 6:14 kuti uchengete murairo, usinoruvara, usina chaungapomerwa, kusvikira pakuvonekwa kwaShe wedu, Jesu Kristu;
15 kwaachazoratidza panguva dzake, iye oga wakaropafadzwa noWamasimbaose, Mambo wamadzimambo, Ishe wamadzishe';
Saka Jesu akasarudzika. Anofamba Kudenga nepanyika nguva imwechete. Hakuna munhu anokwanisa kukwikwidza naye.
Mosesi akasimudza nyoka pamuti kuti vanenge varumwa nenyoka vakaitarisa vaporeswe. Uchiri mucherechedzo unoshandiswa munezvehutano nanhasi.
Kune kuipa kwechivi kunoratidzwa nemucherechedzo wenyoka. Asi chivi chakasimudzwa rini? Pamusoro pazvose Satani akadzingwa kubva Kudenga.
Mwanakomana weMunhu ndiMwari anorarama muMuviri wenyama. Anofanira kusimudzwa pakati peDenga nenyika paanorovererwa pamuchinjikwa. Zvinoreva kuti anofanira kutakura mutoro wenyika wemhosva, kunyadziswa uye chivi. Asi Denga riri rega rinopa mushonga wezvivi. Zvinoreva kuti Mwari aifanira kutambudzika nekuda kwezvivi zvevanhu. Isu vanhu ndisu takakonzeresa kurwadziswa kwemunhu mumwechete asina kubvira aita chivi.
Saka Jesu ndiye ega wepamusoro ane hunhu hunorwisana. Munhu Mumwe asina chivi kubva Kudenga anotakura zvivi zvenyika.
Munhu asina mhosva Mumwechete kubva kudenga akarwadziswa nekutambudzwa nekufa kuti vanhu vane mhosva venyika ino vararame.
Musiki anobva Kudenga, anouraiwa nekutsvinyirwa nezvisikwa zvake.
Mumwechete anoda rudzi rwevanhu, anoparadzwa neruvengo uye hutsinye hwerudzi rwevanhu.
Calvari kwaive kuratidzirwa kwezvinhu zvinopikisana, zvekuti Jesu ega ndiye aikwanisa kutarisana nezviitiko izvozvo. Hakuna umwe munhu nechero nzira aive akakwanira kuita zvaakaita.
JOHANE 3:15 Kuti aninani unotenda kwaari, arege kuparara ave novupenyu bwusingaperi.
Saka tinofanira kuvimba maari zvakazara nezvaakatiitira.
Hatikwanisi kuripira zvivi zvedu tega. Ropa regwayana risina mhosva rakadeurwa muTestamente Yekare. Asi mhuka iri pasi kwazvo pane munhu, saka hupenyu hwegwayana risina mhosva haraigona kuuya mumoyo yevatendi kuti rivaite vanhu vari nani. Saka vairegererwa zvivi asi rudo rwekutadza haruna kubva mavari. Zvakadaro vaifanira kuramba vachiuraya mhuka vachipira ropa kuti riripire zvivi zvavo.
Mhuka dzaive dzisina mhosva kana zvivi asi dzaive dzisinawo hupenyu husingaperi madziri. Saka dzaive dzisingagoni kutipa hupenyu husingaperi.
Saka hakuna chaikwanisa kuitwa nemunhu sechibairo chekuti awane hupenyu husingagumi.
Jesu parizvino anoti makiyi ehupenyu husingagumi kutenda. Kutenda kuti rufu rwake pamuchinjikwa rucharipira zvivi zvedu nekutipa hupenyu husingagumi.
Vakarurama vachararama nekutenda. Ruponeso haruwanikwi kubva pamabasa akanaka atinoita.
HABAKUKI 2:4 ... asi akarurama achararama nokutenda kwake.
VAEFESO 2:8 Nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; izvo zvisingabvi kwamuri, asi chipo chaMwari;
Nyasha kuitirwa zvakanaka zvatisina kufanira. Kutenda chipo chinobva kuna Mwari. Mabasa haana zvaanoreva kana tichifunga kuti achatiponesa.
Saka ruponeso rwedu ruri mumaoko aMwari, kwete edu.
JOHANE 3:16 Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kuparara, asi ave novupenyu bwusingaperi.
Vanhu vakaputirwa nezvivi zvinosuwisa. Asi ndizvo zviri rudo rwaMwari kwatiri kuti akazviita Munhu akazvipira kutora mhosva dzezvivi zvedu paari. Akatora zvivi zvedu kubva kwatiri, nekuda kwekuti tinenge tisisina zvivi, anokwanisa kuisa mupimo weMweya wake Mutsvene mumoyo yedu. Mweya Mutsvene ndiwo wega hupenyu husingagumi huripo. Saka tinokwanisa kuwana hupenyu husingaperi, totenda mabasa akanaka nechibairo chikuru chaJesu.
Asi zvese izvi zvinobva pasimba resarudzo dzekuita zvatinoda. Hatisi marobhoti. Tinofanira kuzvipira kutendeuka nekugamuchira Jesu semuponesi wedu. Tinofanira kuzvipira kuti atonge hupenyu hwedu nenzira imwechete inoshandiswa nemubereku kutonga hupenyu hwemwana mucheche.
Tinofanirawo kuzvipira kutenda zvese zakanyorwa muBhaibheri. Tinofanirawo kuzvipira kurarama maererano neBhaibheri.
Tinofanira kuda kumuteerera kwete kumanikidzwa kumuteerera.
JOHANE 3:17 Nokuti Mwari haana kutumira Mwanakomana wake panyika, kuti arashe nyika, asi kuti nyika iponeswe naye.
Jesu haana kuuya kuzotonga nyika ine zvivi, akauya kuzoiponesa. Akauya kuzotipa mukana watisina kutombofanira. Akauya kuvanhu vese, zvisinei nekutadza kwavo. Vanhu ava vakamurumbidza musi weSvondo yemichindwi paaive akatasva mbongoro. Asi vatungamiri vezvitendero vakabva vakurudzira vanhu vamwechete ivavo kumuroverera musi veChishanu chakatevera.
Saka vaive vanhu vaakatonga kuti vanyengeri. Vatungamiri vezvitendero vechiJuda nekuti vaimupikisa vachidzidzisa vanhu kumuramba pachinzvimbo chekutungamirira vanhu kuenda kwaari.
Vatungamiri vezvitendero havagari neShoko rakanyorwa uye vanonyengera vanhu kuti vavatevere munzira isiyo yavanenge vachifamba ivo.
Kune masangano 45000 akasiyana emakereke nemakungano nhasi. Rimwe nerimwe rinoti ndiro rinogona rine chokwadi chese. Saka maKristu akawandisa ari kunyengerwa.
Nhasi Mwari anoda kuzivisa vanhu zvakavanzika zvakavanzwa muShoko rakanyorwa. Anoda kuti vanhu vanzwisise Bhaibheri. Asi vatungamiri vemakereke, vasinganzwisisi zvakavanzika pachavo, vanodzidzisa vanhu kuramba Magwaro mazhinji nekumati haana kukosha, kana kuti haana kufanira, kana kuti haana kunyorwa zvakanaka. Sekutongwa kwakaitwa Jesu muimba yaPirato, saka Bhaibheri reKing James Vhezheni richiri rakanyorwa shoko neshoko zvechokwadi rinorambwa nevatungamiri vemakereke anhasi.
Pamashure pazvo zvese, Jesu ndiye Shoko. Ndiye Bhaibheri. Saka nhorondo inozvidzokorora.
Kupfurikidza chibairo chaKristu pamuchinjikwa takaponeswa kubva kugehena. Akatotiponesa kubva kugehena nekuti akaripira muripo makore 2 000 akadarika. Hatigoni kuzviponesa kubva kugehena. Tinokwanisa chete, nekutenda, kuregererwa pasina muripo kwaanotipa. Idzi inyasha dzatisina kufanira. Inyasha dzake dzakazara dzinoita kuti ruponeso ruvepo kwatiri.
Asi tinodawo kuti tiponeswe kubva kunguva yeKutambudzika iri kuuya.
Nekuva nekunzwisisa kwakadzama kwezvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri tinokwanisa kudzidza chokwadi chakakwana kuti tipunyuke kubva pakutadza kwedzidziso uye chiprofita chemakereke saka nekudaro tinenge tatendera Ishe kuti vatitungamirire neMagwaro akaziviswa vachibva vatiponesa kubva kunguva yeKutambudzika kukuru kuri kuuya.
Hatifaniri kutarisa pamavhesi eBhaibheri toti, “Handizivi zvazvinoreva saka hazvina kukosha uye handina basa nekuzviziva”. Kuita uku hakuzoburitsi Mwenga waKristu matiri. Hakuna achava Mwenga anotaura pamusoro pemudiwa wake nenzira inoratidza kushaiwa shungu naye.
Regai titore muenzaniso. Jesu akapa zvekudya kuvanhu vane zvuru zvishanu akasara nematengu gumi nemaviri emafufu akapa zvakare vamwe vanhu zvuru zvina chekudya akasara nematengu manomwe emafufu. Paakabvunza vadzidzi vake akavabvunza kana vainzwisisa kuti nei matengu emafufu akasara aive gumi nemaviri uye manomwe.
Jesu aitarisira kuti vadzidzi vake vanzwisise zvaaive achiita. Aive asingafadzwe nemhinduro dzinorasisa dzinovhariridzira kusaziva kwedu. Kusaziva Bhaibheri hakudiwi kwatiri.
Tembere yemaJuda yaive nezvingwa gumi nezviviri zvekuratidzira uye zvigadziko zvinomwe zvemwenje.
Saka zviverengo gumi nembiri uye zvinomwe zvine kukosha muhurongwa hwaMwari. Micherechedzo iyi yakakosha uye Mwari anotarisira kuti tiinzwisise. Ari kuedza kutiudza kuti kudii nekupa vanhu zvekudya uye midziyo yemuTabernakeri?
Mwenga ega ndiye achava neshungu dzekuziva. Vasikana vakapusa (makereke akachena akaponeswa) akapusa nekuti vaifunga kuti zvidimbu zvikuru zveBhaibheri zvaive zvisina kukosha. Vaive vasina basa nekuzviziva.
Vasikana vakangwara vanoti, “ndinofanira kuziva”. Zvinobva pakudzidza kuti tive vakangwara.
Vasikana vakapusa vanoti, “Ndinofanira kuzviziva here?”
JOHANE 3:18 Unotenda kwaari, haatongwi; asi usingatendi kwaari, watotongwa, nokuti haana kutenda kuzita roMwanakomana waMwari wakaberekwa mumwe woga.
Kutenda muna Mwari ndidzo nheyo dzekutenda. Muviri wenyu unoshandiswa nenjere dzinoronga mifungo yenyu, kuita kwenyu, uye kubata kwenhengo dzemuviri. Saka Jesu ndiye Musoro wekereke.
Anoda kutungamirira zvese zvatinotenda mazviri uye mabasa edu kuti agone kuvaka zvese zvaanoda kuti zviitwe kuzadzisa Shoko rake rakaziviswa kuzuva redu. Tinofanira kuzvipira zvakazara kwaari tichiita zvinodiwa kuti tiite neShoko rake rakaziviswa. Muviri wake wakatongwa paCalvari. Saka kana tikagara mumiganhu yatinoisirwa neShoko rakanyorwa, tinenge tiri muMuviri wake uye tinenge takatongwa kare. Zvino hatizonyengerwi.
Kana tikaita zvinhu zvedu zvatinoda kana kurarama netsika dzekereke yedu nemazano evafundisi vedu tinobuda muMagwaro. Ndiko kusatenda. Kana tisingatendi zvakanyorwa muBhaibheri, ndicho chivi chikurusa. Tinenge tiine mhosva kutangira ipapo.
Tinofanira kutenda muZita raJesu. Hakuna rimwe Zita rinogona kutiponesa.
MABASA 4:12 Nokuti hakuna kuponeswa kunomumwe; nokuti hakunerimwe zita pasi pedenga, rakapiwa pakati pavanhu, ratingaponeswa naro
Mwanakomana waMwari akatifira, akavigwa, akamuka kubva kuvakafa.
Baba neMweya Mutsvene havana kufa, havana kuvigwa, uye havana kumuka kubva kuvakafa. Saka, kana vari vanhu vakasiyana, havagoni kutiponesa. Baba neMweya Mutsvene mweya, havana ropa rekusuka zvivi zvedu. Saka Zita raJesu chete ndiro rinotiponesa.
Baba vaidaidzwa kuti Jehova. Mweya Mutsvene hauna kupihwa Zita muMagwaro. Kristu zvinoreva kuti Akazodzwa. Asi izvi zvinoreva munhu akazodzwa. Harisi zita reMweya Mutsvene rinozodza.
Kana paine Vanhu vatatu muhuMwari, saka Baba neMwanakomana vega ndivo vane mazita. Mazita maviri kuVanhu vatatu. Jehova naJesu. Hazvina kuringana.
Asi hakuna zita rimwechete kuVanhu vatatu ava. Saka Mwari anorasikirwa neZita rake.
Kana muchiti, “Muzita raBaba, Mwanakomana, neMweya Mutsvene”, ndapota cherechedzai kuti muri kutaura mazita ezvinzvimbo uye marasisa nyaya nekuti hamuna kutaura Zita raMwari.
Mwanakomana waMwari ndipo Mwari paanoita munhu wenyama. Zita rake reMunhu ndiJesu Kristu. Akazodzwa neMweya Mutsvene wakamuita Akazodzwa kana kuti Kristu.
Kuzara kwevuMwari kwaigara muna Jesu paMuviri.
Saka Zita raMwari remunhu ndiJesu Kristu.
Zita iri rega ndiro rinokwanisa kutiponesa kusvikira auya kuzotora Mwenga wake achivashandura kuvapa miviri isingavori.
Zvino havazotadzi zve. Ipapo Mwenga haazodi kuponeswa. Ndicho chikonzero nei, apo Jesu anodzoka, achave neZita idzva. Parizvino, hakuna munhu anoziva Zita idzva iri.
ZVAKAZARURWA 19:12 Meso ake akanga akaita somurazvo womoto; pamusoro wake pakanga panekorona zhinji; wakanga anezita rakanyorwa, risina kuzikanwa nomunhu, asi naiye bedzi
JOHANE 3:19 Kutongwa ndokuku, kuti chiedza chakasvika panyika, asi vanhu vakada rima kupfuvura chiedza, nokuti mabasa avo akanga akaipa.
Kutukwa kuri parudzi rwevanhu ndekwekuti tinoda zvakaipa kupfuura zvakanaka. Rima rinoviga kuita kwedu kwakaipa patinoronga nekusimudza kuita kwekunyengera kusingawonekwi. Hatidi kuti zvinangwa zvedu zvibude pachena sezvo hunhu hwekufunga nezvedu chete hahuna kunaka.
Bar zvinoreva kuti “Mwanakomana wa”. Abba zvinoreva kuti “Baba”.
Saka nekuramba Jesu, maJuda akasarudza Barabba zvinoreva kuti “mwanakomana wababa vake”. Barabba aive mhondi.
MARKO 15:7 Zvino kwakanga kunomumwe wainzi Barabasi, wakanga asungwa pamwe chete navamwe vakanga vamutsa bope, vakavuraya vanhu pabope irero.
JOHANE 8:44 Imi muri vababa venyu Dhiabhorosi, munoda kuita kuda kwakaipa, kwababa venyu iye wakanga ari muvurai kubva pakutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema, unoreva zvake nokuti ndiye wenhema vuye baba vadzo.
Saka Barabbasi aive mwanakomana wababa vake Satani. Ndiye akasarudzwa nemaJuda pachinzvimbo chaJesu.
Nei maJuda akaita sarudzo yakaipa kudai? Nekuti vatungamiri vezvitendero zvavo vakavamanikidza kuita izvozvo.
MARKO 15:9 Pirato akavapindura, akati: Munoda kuti ndikusunungurirei Mambo wavaJudha here?
Muprista mukuru aive asunga Jesu zvichibva pagodo. Hupenyu hwake hwaive hutsvene hwaive hwaburitsa kuipa kwavo pachiedza.
MARKO 15:10 Nokuti wakanga achiziva kuti vaPirisita vakuru vakanga vamuisa kwaari negodo.
11 Zvino vaPirisita vakuru vakakurudzira vanhu vazhinji, kuti vakumbire kuti zvirinani avasunungurire Barabhasi.
Vatungamiri vezvitendero vakakurudzira vanhu kuramba Jesu, anova Shoko raMwari, Bhaibheri.
Vatungamiri vemakereke vanhasi, nekusagona kunzwisisa Magwaro mazhinji, vanopedza nguva yavo huru vachiti mune zvakakanganiswa muBhaibheri. Saka vanokurudzira vanhu kuramba mamwe mavhesi emuBhaibheri.
JOHANE 3:20 Nokuti mumwe nomumwe, unoita zvakaipa, unovenga chiedza, haavuyi pachiedza, kuti mabasa ake arege kubudiswa pachena.
Kutenda mune chimwe chinhu chisiri muBhaibheri zvinongoreva kuti tiri kuparidza rima. Kune ruvengo rukuru kuBhaibheri kuvanhu vasingateveri Magwaro.
Vanhu vakarambana vanoda kuroora zve kana kuroorwa zve vanotambira kure neMagwaro.
12 Vuye kana iye mukadzi akarasha murume wake, akawanikwa nomumwe, unofeva.
Vanokurudzira zvekodzero dzevanoita zvengochani vanomhura Magwaro anoramba kuita kwehungochani muhupenyu.
VAROMA 1:26 Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa; nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa, rive basa ravasina kusikirwa;
27 saizvozvo vanhurume vo vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi, vakakundwa nokuchiva pakati pavo, vanhurume vachiita zvinonyadza navanhurume, vakapiwa mukati mavo mubairo wakafanira wokurashika kwavo
Bhaibheri richagara richipikisa avo vanoda kuita zvakaipa. Ivowo vanopikisawo Bhaibheri nguva dzese.
JOHANE 3:21 Asi unoita zvokwadi, unovuya pachiedza, kuti mabasa ake avonekwe, kuti akaitwa munaMwari
Munhu anokoshesa chokwadi haateveri zvinowandirwa nevanhu.
Tinopedza nguva yese yehupenyu hwedu tichibvisa zvinotikurira. Muono muduku kwazvo pamusoro pehupenyu usingaenderane nezviripo kana kuipa kwechokwadi.
Vafundisi vanopedza nguva yehupenyu hwavo vachigadzira chinhu chavangatengese chemweya chingatengwe nevatengi vechitendero nemari dzezvegumi. Vanoshandura chinhu ichi kuti chienderane mezvinodiwa nevatengi nekugutsa shanduko dzinenge dzichiitika muvanhu. Vanhu muungnao havadzidziswi kunzvera Magwaro kuti vawane nekusangana nechokwadi. Kusaziva Magwaro kunobva kwatonga. Zvinoreva mavhesi emuBhaibheri zvinoshandurwa kasingagumi kuti zviringane nezvavanotenda. Uku ndiko kuita kwekukwenenzvera dzidziso inozosara isina chiremera kana hudzamu.
JOHANE 3:22 Shure kwaizvozvo Jesu wakasvika munyika yeJudhea, navadzidzi vake, akagara’ko navo achibapatidza.
Juda zvinoreva kuti “Regai Mwari arumbidzwe”. Uku ndiko kunofanira kuva kuita kwedu pazviitiko, zvese zvakanaka nezvakaipa.
Kukunda kurarama muzviitiko zvehupenyu tinofanira kutanga nezvikuru zvacho zvatinosangana nazvo misi yese. Mwari ndiye anotonga. Anoshandisa zvese zvakanaka nezvakaipa kunatsa hupenyu hwedu. Angori mativi maviri emari imwechete.
Kana tichifunga kuti chinhu chakaipisisa chaitika kwatiri, zvinoreva kuti hatidi Mwari.
Kana tichida kubatira kufunga kwaMwari, hatifaniri kutsutsumwa pamusoro pezviitiko zvinenge zvichitiwira.
Zvivi zvinobereka zvakaipa. Asi mukuipa kwezviitiko Mwari anenge achiri nezano uye anobudirira kuita zvaanofunga.
Kana tikapa hupenyu hwedu kwaari tinofanira kugutsikana kuenda nenzira yaanenge achitiendesa nayo. Tinofanira kugara tichirangarira kuti kufunga kwakwe hakungave zviitiko zvatinenge takatarisira nezvatingasarudze. Hatifungi kusvika padanho rinosvika Mwari.
Saka tinofanira kudzidza kurumbidza Mwari muzviitiko zvese zvinotiwira. Uku kuita kwakaoma kwazvo.
Tinosvika padambudziko guru revanhu: nei kuine kutambudzika nekurwadziwa?
Kana Mwari akakudzwa muzvinhu zvese, tinenge tichiratidza kuti ane simba rese rekutonga hupenyu hwedu. Zviitiko zvakanaka nezvakaipa zvinosangana zvoita kunge mitsetse yeruvara rwakasviba pabepa jena inoshandiswa kunyora mufananidzo wakanaka. Mukombe unotakura mufaro wedu unokwenenzverwa nebanga rinopinza remarwadzo. Zvese zvinotibatsira. Mufaro unokudza kuita kwemanzwiro edu anomiririrwa nemucherechedzo wemoyo yedu. Izvi ndizvo zvinotiita vanhu. Manzwiro edu mumoyo yedu akafanana nehunyoro mumuti, hunopa hupenyu asi hahuchengetedzi kubva kuzvakaipa. Ndangariro, kutenda, nechokwadi zvinotungamirira pfungwa dzedu kuti dzigone kukunda kutambudzika uye marwadzo. Saka musoro ndiwo mucherechedzo wekugona kwedu kurarama nekukunda munguva yakaipa. Wakafanana negavi rinochengetedza muti. Musoro nemoyo zvinofanira kushanda pamwechete. Mafungiro akanaka nekunzwa kwemoyo kwakanaka kunoshandidzana nenzira yakabatana.
Ngatitarisei chokwadi chehupenyu hwedu.
I JOHANE 5:19 Tinoziva kuti tiri vaMwari, nenyika yose ivete munaiye wakaipa.
ZVAKAZARURWA 12:9 Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare, inonzi Dhiyabhorosi, naSatani, munyengeri wenyika yose; yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo.
VAEFESO 2:2 Izvo zvamaifamba mukati mazvo kare, netsika dzenyika ino, nenzira dzomuchinda wesimba redenga, dzomweya unobata zvino muvana vokusaterera;
Satani ndiye anotonga muchadenga saka musapomere Mwari pamusoro peshanduko dzakaipa dzemamiriro ekunze. Satani anofarira kuparadza.
Adamu paakatendera chivi kupindira, Satani akabva atora kutonga panyika.
Eva akatenda kuti Mwari aive neruzivo rwaaive asingadi kuti vazive. Aida hushe hwaSatani nekungwara kwewakaipa nemazano ake anofadza. Akatenda kuti aikwanisa kwazvo kuzvisarudzira kuti chii chaive chakarurama nekutadza. Zvaive zvakanaka nezvakaipa.
Eva akaramba miganhu yaaive akaisirwa muParadhiso. Aida zvizhinji.
Eva aive mukadzi. Zvakadaro aimiririra kereke.
Saiye, makereke anonzwa achigona kwazvo kugadzirisa Bhaibheri nekurinatsurudza nekuwedzera zvimwe zvisina kunyorwa muBhaibheri vachisiya zvimwe zvidimbu zveBhaibheri zvisingavaitiri, zvisina kuvakoshera, kana zvavanoti zvakatadzikwa.
Eva aida ruzivo ruzhinji uye huchenjeri. Aive nesimba rekuzvisarudzira kuita zvaanoda. Akwanisa kusarudza. Saka Mwari akamupa zvaaida. Aive asiri robhoti rakagadzirwa richiteerera zvese zvakaiswa mariri. Aive asiri mhuka inoshandiswa nekuita kwakaberekwa kuri mairi.
Eva aive asina kuziva mubairo wechivi chake. Akadzingwa muParadhiso aive akufanira kurarama muhushe hwaSatani.
Kana usina mufaro nezviri kuitika panyika, chingorangarirai kuti iri kutongwa naSatani. Ndiye wekupomera pamusoro pezvirikuitika. Eva aida ruzivo rwaSatani. MaJuda akasarudza mhondi Barabbasi. Muchokwadi chehupenyu tinofanira kuripira sarudzo dzedu, kwete kupomera mumwe munhu. Kwete kupomera Mwari.
Saka Mwari akatendera Satani kutiratidza kuti aizotonga sei rudzi rwevanhu.
Satani akapihwa Paradhiso tarirai kuti akaitei naro? Hondo. Hurwere. Kutambudzika. Rufu. Ruvengo. Hutsinye. Kuzvida. Zvinodhaka. Kusavimbika nekusagadzikika mune zvepabonde. Muchetura. Kusvibiswa kwenzvimbo mhepo nemvura.
Saka kusvika parizvino zvinofanira kunge zvava pachena kwatiri kuti Satani haagoni kutonga nyika ino nekuita kwayo kwakabatanidzwa. Semudzvanyiriri anobira nekuparadza nyika yake. Mudzvanyiriri anofara, vanhu vake vanotambura. Nyika inonanga kunoparara.
VAHEBERU 6:18 … nokuti pazviri Mwari haagoni kureva nhema,
Mwari haanyepi. Saka kana vanhu vachida kutevera zano raSatani, Mwari anovatendera kuita izvozvo. Ndiko kushanda kwesimba rekugona kusarudza nekuita zvatinoda.
Mwari haangamisi kuipa nenjodzi dzese dzinokonzerwa nemubairo yekuita kwaSatani kwakaipa.
Kana akaita izvozvo, Mwari anenge achinyepa kwatiri sezvo tisingagoni kuzoona kuipa kunokonzereswa nezvivi zvaSatani.
Vanhu vakada sarudzo yechivi saka tinofanira kusangana nezvose zvinokonzereswa nezvivi.
Eva aida zano raSatani. Saka kwemakore 6000 satani akakunda kupa vanhu mazano akabudirira pakushandura paradhiso raMwari reEdeni kuriita chinhu chakaipa umo ruzivo rwepfunga dzevanhu rwetekinoroji runodzikisirwa nehuvori hwerudzi rwevanhu rwune kuchiva nekuda zvebonde mukuita kwavo.
Mwari akatenderawo vanhu kuzviitira hurumende dzavo pasi pehutungamiri hwaSatani.
Adamu naEva vaida kuita zvinhu zvavo vega pasina kupindira nekutonga kwaMwari. Vanhu vakazvitonga nezvematongerwo enyika zvinobereka hudzvanyiriri, hutsinye, huwori, kusavimbika, mhirizhonga, hondo, mhosva, makaro uye nhamo. Vakapfuma vanoramba vachipfuma varombo vachiwedzera kuva varombo. Kusagovana kwakaenzana kwehupfumi kunoramba kuchiwedzera nekufamba kwenguva.
Vanhu vakangwara vakava vezvesainzi. Asi muti wekuziva unorasisa nekuti unobereka zvese zvakaipa nezvakanaka. Pakati pezvinhu zvikuru zvavakakunda kugadzira vakagonawo kugadzira doro, fodhya, zvinodhaka, kusvibisa mweya nenzvimbo, muchetura, mabhomba, zvombo zvehondo, pfuti kushanduka kwemamiriro ekunze uye mifananidzo yevanhu vakashama.
Takadzidza kuparadzanisa atomi uye kuparadza wanano.
Sainzi dzedu dzakanaka ndiyo mishonga inomisa kufa kwevana nekuita kuti vanhu vakura varambe vachirarama. Asi ruzivo rwevanhu runorasisa rwakasangana zvakanaka nezvakaipa. Mubairo mukuru weruzivo rwezvekurapa ndiko kuwandisa kwevanhu kunowedzera vanhu zvuru zvemamiriyoni mumakore gumi nematatu ega ega. Hazvigoni kuti pave nezviwanikwa zvakakwana kuwanisa vanhu vese ivavo. Hafu yevanhu vari pasi rese vave kugara mumaguta umo kuwanda kwedzimba dzematangwena kuri kukura pachiso chenyika musenturi radarika. Kukura kwehuwandu hwevanhu kunounza kurarama pachinzvimbo chehupenyu. Munguva inouya munouya pfungwa inotyisa yekuwandisa kwevanhu.
Saka rudzi rwevanhu rune mutungamiri akaipa muna Satani. Asi ndiye akasarudzwa nevanhu.
Dambudziko raMwari guru. Mwari angapa sei vanhu simba rekuita kuda kwavo asi aine vanhu, nekuda kwavo, vanoda kuzviwisira kuna Mwari zvakazara?
Charles Darwin akatanga tsananguro dzekushanduka kwevanhu kubva mumhuka aifunga kuti sero rimwe rinorarama raive rakareruka. Aifunga kuti rinotanga kurarama kubva pamukana muduku kubva pamakemikari akafa muchiitiko chinongoitika chisina kubvira chaonekwa. Vezvesainzi vanhasi, vadzidza zvakawanda kukunda Charles vanotsanangura “kureruka” kwesero segomba risina muganhu rekusanzwisisika. Hakuna mugumo wekusanzwisisika ungadiwa nehupenyu. Hupenyu mweya unobva kunzvimbo yepamusoro-soro yechishanu. Saka hakuna magumo pakusanzwisisika kwahwo munzvimbo yedu yepazasi kwazvo yechina yenzvimbo nenguva.
Sekusakwanisa kwatinoita kuongororesa kusanzwisisika kwehupenyu hwezvinorarama, hatigoniwo kuongorora nekutonga kusanzwisisika kwehunhu hwevanhu. Hakuna muganhu kundangariro dzevanhu munzvimbo dzese dzezvakanaka nezvakaipa. Saka rudzi rwevanhu rwakabudirira kwazvo munezvetekinoroji nezvigadzirwa zvinoshamisa asi zvinopera nekuita kwevanhu. Hukama nehunhu hwevanhu zviri kuwodzwa.
Kusanzwisisika kwekuita kwechivi kuri kukura kwazvo zvekuti vanhu vave kuremerwa nekuipa kwacho. Kubvunza “Nei Mwari asiri kumisa izvi?” mubvunzo usina maturo. Kunyange dai Mwari akazvimisa, hazvingagadzirisi kana kubvisa dambudziko rezvivi. Chivi chakafanana negomarara. Madhokotera akakwanisa kuita budiriro yakati kuti vachirwisana negomarara asi havasati vagona kurikunda. Zvimwechetezvo, chinoramba chichienderera mberi zvisinei nekuti vanhu vanoedza zvakadii kuchikunda.
Kunamata Baari naMoreki zvaisanganisira kuuraya vana muchinamato chechipegani muTestamente Yekare. Nhasi uno kune kubviswa kwemimba chinamato chechipegani chanhasi. Vana vasina zvavanogona kuita kuzvibatsira vari kuuraiwa zvine hutsinye nevamhu vamechete vanorapa kuita kuti vana nevanhu vakuru vararame. Kubvisa mimba kwakakurudzirwa naHillary Clinton akakunda kusarudzwa kuva mumiririri webato rake musarudzo dzekutsvaga mutungamiriri wenyika yeAmerica muna 2016. zvakadaro, haana kuzokunda kuva mutungamiri wenyika paaizokudza kuuraiwa kwevana vasina mhosva uku.
Mumakore 37 kubva mugore ra 1980 kwakabviswa mimba dzinokwana bhiriyoni rimwechete nehafu pasi rese.
Hunhu hwevanhu huri kurwara kumweya waho. Tave kurarama munguva dzerima. Chiedza chiri kudzima.
I Johane 3:8 Uyo, unoita zvivi, ndowaDhiabhorosi, nokuti Dhiabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga. Mwanakomana waMwari wakavoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa aDiaborosi.
Jesu ndiye ega anokwanisa kuparadza zvivi. Hakuna mumwe. Saka tinofanira kuva nekutenda tosiira iye hondo yese. Chingava chii chiri kuitika, iye anoziva zvaari kuita tinofanira kuvimba naye. Zvatinofunga hazvina maturo. Nyaya iyi yakaoma kwazvo kuti isu tiinzwisise. Hondo yacho ndeyemweya, iri kurwiwa munzvimbo dzekumusoro. Zviri kuitika panyika ungori mumvuri wehondo inotyisa chaiyo. Kunamata, kurumbidza nekuvimba kuBhaibheri, nekuvimba kuti Mwari anokunda hondo dzedu ndizvo zviri kudiwa kwatiri.
Kupomera Mwari pamusoro pekuipa kwaSatani kutambisa nguva.
Mwari akaisa hupenyu panyika neMazuva matanhatu. Makore zvuru zvitanhatu. Panguva iyoyo akaita paradhiso.
Eva akabva afungidzira kuti angadzidza zvakawanda akava mwari. Meso ake aizozarurwa. Aizokwanisa kuziva musiyano pakati pechakanaka nechakaipa. Nekuti aikwanisa kuita kuda kwake, Mwari akamutendera kuenda nzira yaakasarudza. Saka kwemamwe Mazuva matanhatu, makore zvuru zvitanhatu zvenhorondo yevanhu, Mwari akatenderawo vanhu kuedza nzira dzese dzehurumende dzingavatonga uye zvitendero zvavanganamata zvavangafunga nezvazvo. Kuita zvaunoda zvinoreva kuti munhu mumwe nemumwe anokwanisa kuita zvake ega. Zvinorevawo kuti Satani anokwanisawo kuita zvake nekuronga rudzi rwese rwezvakaipa zvingafungwa nenjere dzake dzakapesana. Satani akangwarawo kutipfuura. Saka anonyengera rudzi rwevanhu nguva dzese. Satani anogara munzvimbo yechishanu yepamusoro, nzvimbo yevakarasika. Njere dzevanhu dzakaoma zvadzinofunga zvekuti ndangariro dzedu dzinokwanisa kufunganya pamusoro penzvimbo ino dzokurudzirwa naSatani nemadhimoni ake. Nekudaro tinobva taita sarudzo dzakaipa panyika.
Saka pakupera kwemakore 6000 enhorondo yevanhu aive ari pasi pekubata kwaSatani, nyika inopatsanurwa kuva zvikwata zvina. Kereke yechokwadi kana kuti Mwenga waKristu asingavimbi nechero chinhu chinosanganisa munhu, asingadi hutungamiri hwemunhu mumwechete, uye anotenda kune zvakaziviswa muShoko raMwari rakanyorwa muBhaibheri. Ava tinovadaidza kuti vasikana vakangwara. Zvino kunobva kwauya vasikana vakarara kana kuti vakapusa, makereke akachena akaponeswa asi vasina mafuta akakwana kuti vaite mwenje wakakwana kuti vaverenge Bhaibheri. Saka havanzwisisi zvizhinji zviri muBhaibheri. Vatendi vakaneta nekuti vanotenda zvikamu zveBhaibheri vachiramba zvimwe zvidimbu. Vanoungana pamwechete mumakereke avo vachitenda kuti kuvimbika kumukuru wekereke yavo (nemhuri yake) uye kuenda kukereke kakawanda zvichavaponesa. Magumo avo achava nguva yeKutambudzika kukuru. Ikoko ndiko kwavachamutswa vachizoona kukura kwekunyengerwa kwavakaitwa pamweya.
Zvino vasina kuponeswa. Ava ndivo vasingatendi vanoenda kukereke vanosarudza kereke yavo panzvimbo peBhaibheri. Zvinosanganisawo vose vasina kuponeswa vasina chekuita nekereke. Nguva yekutambudzika kukuru nezuva rekutongwa zvakavamirira. Ramangwana risina kugadzikika rinotyisa kwazvo.
Chikwata chechina maJuda vari kudzokera kunyika yavo yeChipikirwa. Mwari ane hurongwa hwakasarudzika navo munguva yeKutambudzika kukuru.
Pakupedzisira, chinangwa chemakore 6000 enhorondo yevanhu ndechekutiita kuti tinete zvakakwana naSatani nezvivi uye kushaya maturo kwezvematongerwo enyika zvevanhu uye vatungamiri vezvitendero.
Zvese zvakaedzwa nevanhu hazvishandi uye vakuru vemakereke vakangogona kuita kuti vasikana vese vakangwara nevakapusa vagare vakarara.
Chidimbu cheMagwaro chavanoziva chinobviswa nekusaziva uye kutadza kwevatungamiriri vemakereke kupfurikidza kuramba kwavanoita zvidimbu zvakaziviswa zveshoko raMwari rakanyorwa. Nhasi uno vafundisi mumakereke havachatsigira zvavanotenda nekubatanidza Magwaro pamwechete. Havachanzwisisa zvimwe zvidimbu zveShoko rakanyorwa sezvo kutenda kwavo mazuva ano kwava pamashoko akabatwa paitaura vanhu. Izvozvi kwava nemasangano anosvika 45000 emakereke akasiyana-siyana nezvavanotenda zvakasiyana, vese vemagungano nevasiri. Dziva remazano evanhu risina tariro iri inzira yekunorasika.
Tinodzokera kuna Johane Mubapatidzi.
Rubapatidzo runova mucherechedzo wekufa nekuvigwa kwekuda kwedu. Kutendeuka kwechokwadi rudo rwekuparadza nekuramba kuda kwedu tozvipa kuna Mwari sechibairo. Tinokoka Jesu kuti agare matiri uye atore hupenyu hwedu hwatakaipisa. Kumuka mumucherechedzo wekubva mumvura murumuko rwehupenyu hutsva, Hupenyu hwaMwari huri matiri. Tinofainira kufa mukuita kuda kwedu hunhu hwedu vanhu hahugoni kufunga chokwadi. Tinofanira kuvimba neShoko rakanyorwa chete.
JOHANE 3:23 NaJohane wakanga achibhabhatidza vo paAinoni, pedo neSarimi, nokuti kwaiva nemvura zhinji ipapo; vakavuya, vakabhabhatidzwa.
Ainoni zvinoreva kuti chitubu chemvura kana kuti nzvimbo inobuda mvura kubva pasi
Sarimi zvinoreva kuti pakachengetedzeka kana kuti pasina kuputsika.
Chitubu chechokwadi chakachengetedzeka kana kuti chisina kuputswa nemazano evanhu ndiwo Magwaro akanyorwa.
Shoko raMwari rakanyorwa, patinotenda mariri nekuriteerera, ndiro rinoita mvura yega inotisuka tichichena.
JOHANE 3:24 Nokuti Johane wakanga achigere kuiswa mutirongo.
Johane akanongedzera vanhu kuna Jesu anova Shoko. Dambudziko rimwechete rekuparidza Shoko kwaJohane raive rekuti akaudza Herode kuti haafaniri kuroora munhu akarambwa. Kumira neBhaibheri kwaive kusina mbiri kana kunaka munezvematongerwo enyika. Akapedzisira asungwa aiswa mutorongo.
Izvi zvinoratidza kuti nyika inoramba sei chokwadi. Vakaramba muprofita aivepo kukura nzira yeKuuya kwekutanga kwaMessiasi.
Saka ndicho chinhu chimwechete chichaitika paKuuya kwechipiri kwaMessiasi.
Zvinopikisa Magwaro kuti munhu akabuda muwanano apinde mune imwe. Asi makereke, kuti achengetedze mbiri yaari nayo, vanozvitendera. Saka vatungamiri vemakereke vanobva pakureva kweMagwaro vorasisa vanhu vanovatevera. Jesu Shoko, haadiwi.
Asi iyi inzvimbo yakaipisisa. Kurambana nekupinda mune dzimwe wanano zvinoreva kuti muri kurarama muhupombwe.
I VAKORINTE 6:9 Ko hamuzivi kuti vasakarurama havangagari nhaka yovushe bwaMwari here? Musarashika; nokuti mhombwe, kana vanonamata zvifananidzo, kana vanofeva, kana vakapata, kana vanoita zvakaipa navarume,
Vafundisi vemakereke vanochatisazve vanhu vakabuda muwanano vari kuvaita kuti vagare vari kunze kwehushe hwaMwari.
Kuramba kutendera vanhu vakabuda muwanano kuwana kana kuwanikwa zve kwakaita kuti Johane apinde mutorongo paKuuya kwaJesu kwekutanga.
Saka vaprofita vachakura nzira yeKuuya kwaJesu kwechipiri vacharambwa nemakereke ese anotendera vanhu vakabuda muwanano kuwana nekuwanikwa zve.
Kurambana haisi nzira yeMwenga waKristu yekugadzirira wanano neGwaiana.
JOHANE 3:25 Zvino nharo dzikamuka pamusoro pokuzvinatsa pakati pavadzidzi vaJohane nomumwe muJudha.
Nekuti rubapatidzo chaive chinhu chitsva chaive chaziviswa naJohane, maJuda akafungidzira kuti rubapatidzo rwemvura rune chekuita nekusukwa kwekunatswa. VaRevi vaibatsira vaprista vaifanira kunatswa nekusukwa nemvura.
NUMERI 8:6 "Bvisa vaRevhi pakati pavana vaIsiraeri, uvanatse.
7 Pakuvanatsa unofanira kuvaitira kudai: Sasa pamusoro pavo mvura inosuka zvivi, ugovaraira kuti vaveurwe muviri wavo wose nechiso, vasuke nguvo dzavo, nokuzvinatsa.
Revi zvinoreva kuti “kubatanidzwa”.
VaRevi vaive vasina nzvimbo yenyika munyika yeIsraeri vaigara mumaguta pakati pemarudzi avaIsraeri vachibatsira kubatanidza maJuda naMwari nekubatsira vaprista nemabasa avo echitendero.
Asi kusukwa kwepanyama nemvura kwaive kusisiri kunatswa chaiko.
Mumashure meCalvari, Mweya Mutsvene waizouya mumoyo yevanhurume nevanhukadzi vakatendeuka, izvozvo zvaizovasuka kubva mukati pachinzvimbo chekusuka kunze.
MABASA 15:8 Zvino Mwari, muzivi womoyo, wakavapupurira, akavapa Mweya Mutsvene sesu;
Kukosha muTestamente Itsva kwaive kusisiri pakusukwa kwekunze asi kutenda kwemukati kwekutenda kuBhaibheri. Kugamuchira Mweya mutsva, Mweya Mutsvene, mumoyo yedu kuti usuke ndangariro dzedu nezvatinoda kuita.
JOHANE 3:26 Vakavuya kuna Johane, vakati kwaari: Rabhi, uya waiva nemi mhiri kwaJorodhani, wamaimbopupurira, tarirai, iye unobhabhatidza, vuye vose vanovuya kwaari.
MaJuda akauya paAinoni kuti audze Johane Mubapatidzi kuti Jesu, akabapatidzwa Johane paaive pedyo neBethabara kune rumwe rutivi rweJorodani, aibapatidzawo. Jesu uyu akanga atanga kukwezva meso evazhinji. Vanhu vese vaienda kwaari. Jesu akatanga kuva nembiri uye kuzivikanwa kukunda Johane.
Johane aive anongedzera vanhu kuShoko (Jesu) saka Shoko raive ratanga kuzivikanwa zviri nani kukunda Johane. Johane haana kugumbuka kere? Vaparidzi veMharidzo vanoisa kukosha pahama Branham nezvaakataura. Asi kusimbisa kutenda kwemunhu muShoko raMwari ndiko kwakanyanya kukosha.
JOHANE 3:27 Johane akapindura, akati: Munhu haangagamuchiri chinhu, kana asina kuchipiwa chichibva kudenga.
Mwari anopa chipo kumunhu wese anomubatira. Saka zvinoitirwa Mwari nemunhu, Mwari anofanira kuwana kukudzwa mazviri. Saka kana munhu asina kuwana kukudzwa kubva mukuita chinhu chakanaka, hazvisi zvenyama. Chero hurongwa hwaMwari huchienda mberi, ndizvo zvega zvinoverengwa. Kushaiwa kukosha kwemunhu ashandiswa hakuna basa.
JOHANE 3:28 Imi mumene mungandipupurira, kuti ndakati: Handizi Kristu ini, asi kuti ndakatumwa pamberi pake.
Johane haana kubvira ada kuva Jesu. Johane aive atumwa kunomuzivisa kumaJuda. Muprofita haasi Mwari.
JOHANE 3:29 Unomwenga ndichochikomba; asi shamwari yechikomba inomira ichimunzwa, inofara zvikuru nenzwi rechikomba. Naizvozvo kufara kwangu uku kwazadzika.
Muprofita anofara kumira pedyo naMwari.
Jesu chikomba akawana Mwenga mukati memakore 2000 enhorondo yekereke. Jesu ega ndiye anokwanisa kufamba rwendo rwemakore 2000 achitora maKristu vaitenda munguva yavo. Saka Jesu ega ndiye akakosha. Johane Mubapatidzi akauya kereke yekutanga isati yaberekwa pazuva rePentecosti. Saka aive asiri nhengo yekereke yekutanga. Aive muprofita wekupedzisira kumaJuda Messiasi wavo asati auya. Johane aizvitora seshamwari yaJesu. Kukudzwa kwakadii. Zvino Jesu zvaaive atanga kuparidza, Johane aikwanisa kufara nechikonzero chekuti aive azivisa Izwi raMwari kuvanhu.
Jesu ega pachake ndiye Izwi raMwari.
Johane akaziva kuti zvinhu zvaizoenda nenzira isina kutarisirwa nemaJuda nekuti maJuda aive varanda vaMwari. Zvisinei, chimwe chikwata, Mwenga, aizouya panzvimbo. Johane haana chaaiziva pamusoro pekereke yemaHedeni yaiuya. Aingoziva kuti aive aita basa rake zvakanaka uye Jesu, Izwi raMwari, aive achitaura nevanhu. Izvi zvakapa Johane mufaro mukuru.
Muprofita weKuuya kwekutanga aive asiri Izwi raMwari, asi akafara kuti kuparidza kwake, mharidzo yake, yaive yazivisa Izwi raMwari, Jesu Kristu Shoko raMwari.
Vanhu vaive vatanga kuteerera Jesu, kwete Johane.
Mazwi akataurwa naJohane Mubapatidzi akazivisa Shoko (Jesu) kuvanhu. Jesu aive asina aikwikwidzana naye kana muvengi. Saka kukura kwaiita Shoko raMwari mundangariro dzevanhu, ndiko kuperawo kwaiita kukosha kwemuprofita Johane.
Muprofita aive mukuru asi aive asingagoni kuvaponesa. Jesu ega ndiye aikwanisa.
Muprofita aive asiri Mwari pamuviri. Jesu ndiye aive Mwari pamuviri. Emanuere.
Muprofita aive asina kuberekwa nemhandara, asi Jesu.
Johane akafamba pakati pevanhu nekuita kwemweya. Asi Jesu akafamba pamusoro paJohane Mubapatidzi.
JOHANE 3:31 Unobva kumusoro ndiye uri pamusoro pavose; nounobva panyika ndowenyika, unotaura zvenyika; unobva kudenga ndiye uri pamusoro pavose.
Johane aikwanisa kutaura pamusoro pezvinhu zvenyika ino sedemo richitema midzi yemuti. Akatsanangura vatungamiri vechitendero vechiJuda senyoka.
Asi zvino tinofanira kushanda naJesu anova Mwari anorarama muMuviri wemunhu. Anouya kubva kunzvimbo yepamusoro-soro yeDenga kwaainemuonero wakajeka wezvinhu zvese zviri munguva yakadarika nenguva inouya yenhorondo yevanhu. Saka Jesu ari pamusoro pavose, kwete paruzivo nepamaonero ake chete, asi pasimba. Hakuna munhu anogona kumudzidzisa chero chinhu.
JOHANE 3:32 Zvaakavona nezvaakanzwa, ndizvo zvaanopupura; asi hakunomunhu unogamuchira kupupura kwake.
Jesu anokwanisa kutiudza zvinhu zvese pamusoro perudzi rwevanhu. Anozivisa zviitiko zvenguva iyoyo zvemaJuda nezvitendero zvavo uyezve zviitoko zvichawira maJuda pavanomuramba otendeukira kumaHedeni. Asi maJuda vanokurudzirwa nevatungamiri vavo vezvitendero kuti varambe Jesu.
Nhengo dzekereke nhasi dzinoramba Shoko raMwari rinoziviswa rinorwisana nedzidziso dzevatungamiri vemakereke avo.
JOHANE 3:33 Uyo wakagamuchira kupupura kwake, wakasimbisa kuti Mwari ndowa zvokwadi.
Asi avo vanotenda kuShoko raMwari rakaziviswa votaura kuti Shoko rakanyorwa nderechokwadi uye kuti ndiro chisimbiso chisina munhu anokwanisa kuchiputsa kuti ashandure Shoko.
Mwari anotuma munhu anotaura zvichibva kuBhaibheri chete.
Jesu ndiye aive Shoko raMwari rakazara nekuti kuzara kwevuMwari kwaigara maari.
Jesu haana kubvira ashanduka.
Saka achiri Shoko raMwari rakazara. Bhaibheri ndiro mukuru wedu.
Jesu haana mweya nemupimo sezvatiri imi neni. Ane Mweya usina kupimwa, hauna muganhu.
Kana munhu akasimbisa zano rake nekuritsigira nemavhesi emuBhaibheri ndipo pega pamunokwanisa kuva nechokwadi chekuti zvaanotaura ichokwadi.
JOHANE 3:35 Baba vanoda Mwanakomana, vakamupa zvose muruvoko rwake.
Chikamu chaJesu chatinokwanisa kuzvionera isu iBhaibheri. Jesu anotenderana nezvese zvakanyorwa muBhaibheri. Haashanduri chero chinhu chakanyorwa. Saka kana muchitenda kuShoko rakanyorwa muBhaibheri, mune ndangariro dzaMwari dzinokutungamirirai nekukuchengetai. Jesu, seShoko raMwari, ane zvese zvinoshuvirwa naMwari kurudzi rwevanhu.
JOHANE 3:36 Unotenda kuMwanakomana, unovupenyu bwusingaperi; asi usingatereri Mwanakomana, haangavoni vupenyu, asi kutsamwa kwaMwari kunogara pamusoro pake.
Evangeri guru. Gamuchirai Jesu mumoyo yenyu seMuponesi wenyu pamunotendeuka kubva kuzvivi zvenyu. Regai Mweya wake ukure mamuri kuti ukunatsei nekukusukai. Motendera Mweya Mutsvene wake kuti utonge hupenyu hwenyu nekuzivisa Shoko raMwari kwamuri sezvo richikuitai kuti mutende kuShoko rakanyorwa. Mweya Mutsvene unokura mamuri uyu ndiwo hupenyu husingagumi.
Asi avo vasingatendi kuBhaibheri havangaoni hupenyu. Hakusi kuziva kwenyu. Hakusi kubudirira kwenyu muhupenyu. Zvese zvinobva pakuti munotenda kuBhaibheri Shoko rakanyorwa here kana kuti kwete.
Kana tisingatendi kuBhaibheri rakaziviswa tiri panjodzi.
Saka zvese zvinobva pakuti tinotenda zvakadii kuBhaibheri rakanyorwa. Hazvibvi pakubudirira kwedu kana kukundikana sezvo zviri zvinhu zviriko. Sevanhu, takafanana nemari duku yechenji muruvoko rwaMwari muzvirevo zvezvatakaita kana zvatisina.
Asi chakakosha ndechekuti tinotenda kune zvakaitwa nekutaurwa naJesu. Iye ega ndiye hama musununguri wedu. Iye ega anotiponesa kubva kugehena. Iye ega anotiponesa kubva kunguva yekutambudzika kukuru kunova kutsamwa kwaMwari pamusoro perudzi rwevanhu.